အိမ်ထဲမှာပဲနေတဲ့အခါတောင် Sunscreenအသုံးပြုသင့်သလား? – YANGON STYLE
နေမှ လာသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် UVA/UVB တို့နှင့် ထိတွေ့သည်နှင့်အမျှ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း/ အရေးအကြောင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်း နှင့် အရေပြားဆိုင်ရာ ပြဿ နာ များကနေ အရေပြားကင်ဆာအထိ ဖြစ်ပွားထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို သိရှိထားကြပါတယ်။
အရေပြားကို ဆိုးဝါးစွာ ထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့ UVA/UVB သည် နေရောင်ခြည်မှာ သာမက Digitial ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့TV/ Computer / Mobile Phone များမှထွက်သောအလင်းမှာလည်း Blue light rayအဖြစ် ပါဝင်ပါတယ် ။Digitial ပစ္စည်းများမှထွက်သော Blue light ray တွေကလည်း အရေပြားကိုအကြီးအကျယ် ပျက်စီး ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးစွဲခြင်းက သင့်အသားအရေကို သင်ထင်ထားတာထက် အဆပေါင်းများစွာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို ထိခိုက်မှုတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ဆို အိမ်မှာနေရင်တောင် Sun block (နေရောင်ကာ လိမ်းဆေး) လို့အလွယ်ခေါ်တဲ့ UVA/UVB ကိုကာကွယ်သော SPF ပါဝင်တဲ့ cream တွေကို လိိမ်းသင့်ပါတယ်နော်။
ခုလို အိမ်တွင်းပုန်းနေတဲ့အချိန်မှာ Work from home ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် / အနားယူရင်းTV တွေ ဖုန်းတွေအကြည့်များနေချိန်ဖြစ်တာမို့ နေရောင်နဲ့ ထိတွေ့မှုနည်းတဲ့ အိမ်မှာနေရင်း တောင် အရေပြားဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ Stay home ရင်း အိုမင်းမလာရအောင် Skincare အဆင့်တစ်ခုမှာSunscreen လေးလိမ်းပြီး အရေပြားဆိုင်ရာ ပြဿ နာများကို ကာကွယ်ထားသင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း နေပူထဲမသွားပဲ အိမ်မှာနေရင်း sunscreen လိမ်းဖို့ဆိုတာ လူတိုင်းလိုလို ဝန်လေးမိမှာပါ။ စေးကပ်မှုမရှိပဲ အသားထဲ စိမ့်ဝင်လွယ်တဲ့ Gel . ရေဓါတ်ပါဝင်မှုများပြားသော SPF ပါဝင်တဲ့ Cosmetic တွေကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ မြန်မာရိုးရာ သနပ်ခါးအေးအေးလေးကလည်း အဆင်ပြေစေမှာပါ။ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတော့ သေချာ cleaning လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။